Ihe ntinye akwukwo nso - MH Blog - Ningbo MH
Na-adịbeghị anya blog posts
Idenye aha via RSS
Nlekere 122TH Canton
A ga-eme Ememme 122nd Canton n'oge na-adịghị anya na Guangzhou, China. A ga-atụle ngosi ahụ n'ụzọ atọ, akọwapụtara dịka n'okpuru:
Oge M: 15th Oct. ---- 19th Oct., 2017
Ngwaahịa: usoro, ngwá electronic, ironware na ihe owuwu ụlọ
Oge nke II: 23rd Ọkt. ---- 27th Oct., 2017
Ngwaahịa: ahia, onyinye na mma ụlọ
Oge nke III: 31st Oct. ---- 4th Nov., 2017
Ngwaahịa: textiles, apparels, akpụkpọ ụkwụ, ọrụ nchịkwa, ọgwụ na ihe oriri
Adreesị: Mba. 380 Yuejiang Middle Road, China Ụlọ mbupụta ihe ngosi na mbupụ
Anyị ga-aga nke atọ; ka anyị leba anya n'usoro anyị.
Oge nke III:
Ụlọ Ntuka 14.4 A12-16, B07-11 Textile Material Complex Complex
Ọ bụrụ na ị ga-agakwa ngosi ahụ, na-akwụ anyị nleta n'ihi na ọ bụụrụ anyị nnukwu nsọpụrụ. Na-atụ anya izute ndị enyi niile na Guangzhou.
MH Ụlọ ọrụ Ntugharị
Nlekere 121TH Canton
in	Uncategorized ngosi
A ga - eme Ememme 121th canton Fair na Guangzhou, China. A ga-atụle ngosi ahụ n'ụzọ atọ, akọwapụtara dịka n'okpuru:
Oge M: 15th Apr. ---- 19th Apr., 2017
Oge nke II: 23BE Apr. ---- 27th Apr., 2017
Oge nke III: 1st May ---- 5th May, 2017
Rịba ama: Ememe Ememe Ememe
Anyị ga-achọ ịkọwa na maka 2017 Spring Holidays Holidays, anyị ga-ewepụ ụnyaahụ site na Jan. 27th ruo Feb. 2nd wee laghachi ọrụ na Feb. 3rd (Friday), 2017. Iji mee ihe ngwa ngwa, anyị ga-arụ ọrụ na Jan. 22nd (Sunday) na Feb. 4th (Saturday) 2017. Ndoo maka nsogbu ọ bụla mere ma kelee ekele maka nkwado na nghọta gị. Anyị na-atụ anya ka gị na gị kwenyere na New Year. Obi Ụtọ Afọ Ọhụrụ ma chọọ ka ịga nke ọma na afọ na-abịanụ.
Oge ezumike: Jan. 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, Feb. 1st, 2nd
Anyị ga-akpọtụrụ gị ma ọ bụrụ na anyị alọghachi ọrụ!
Nlekere 120TH Canton
A ga - eme Ememme 120th canton Fair na Guangzhou, China. A ga-atụle ngosi ahụ n'ụzọ atọ, akọwapụtara dịka n'okpuru:
Oge M: 15th Oct. ---- 19th Oct., 2016
Oge nke II: 23rd Ọkt. ---- 27th Oct., 2016
Oge nke III: 31st Oct. ---- 4th Nov., 2016
Anyị ga-aga nke abụọ na nke atọ; ka anyị leba anya n'usoro anyị.
Ụlọ Ntuzi 14.4 B21, 14.4 D21 Home Supplies Fair Complex
Ụlọ Ntuka 14.4 A12-14, B09-11 Textile Material Complex Complex
Ụlọ Ntuzi 15.4 E29-31 Textile Material Complex
MH App bụ online ugbu a, nabatara ma jikọọ club MH!
l Kedu ihe MH APP maka?
Ngwa ngwa na-achọgharị ngwaahịa ma nweta nzaghachi ozugbo.
Kpọmkwem oge na kọntaktị na ndị ahịa MH gị.
Nata ozi MH kachasị ọhụrụ na nata ozi nkwado.
Chọta alaka ụlọ ọrụ maka ọrụ ihu na ihu.
l Kedu otu esi enweta akaụntụ na-egosi eziokwu na MH App ngwa ngwa?
Biko tinye aha onye ahịa gị aha mgbe ị debanyere aha.
l Olee otú iji wụnye MH App na ekwentị gị?
I nwekwara ike ibudata ngwa si Google Play ma ọ bụ Ụlọ Ahịa Store. Nyocha maka "NINGBO MH"App
Rịba ama: Ọgba ọsọ ụgbọ mmiri Dragon
N'ihi ọbịbịa nke ụgbọ mmiri Dragon Draat, a ga-emechi anyị na 9th June (Tọzdee) 2016 wee laghachi ọrụ na 10th June (Friday), 2016. Ndoo maka nsogbu ọ bụla mere ma kelee ekele maka nghọta gị na nkwado gị. Anyị ga-eme ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị alọghachi. Daalụ nke ukwuu!
Nzukọ Egwuregwu MH
N'oge na-adịbeghị anya, anyị amarala na onye na-apụta Ningbo MH Industry Co., Ltd. na Facebook ma na-agbagha ndị ahịa anyị site n'ọtụtụ ego. N'ebe a, anyị na-echetara anyị na tupu ị kwụọ ụgwọ, biko jụọ anyị maka ozi akaụntụ akụ.
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla, egbula oge ịkpọtụrụ anyị site na email ma ọ bụ ekwentị:
Adreesị Facebook anyị bụ: https://www.facebook.com/NingbomhOfficial/
Nlekere 119TH Canton
The 119th A ga-enwe Fair Fair na Guangzhou, China. A ga-atụle ngosi ahụ n'ụzọ atọ, akọwapụtara dịka n'okpuru:
Oge M: 15th April ---- 19th April, 2016
Oge II: 23rd April ---- 27th April, 2016
Oge nke III: 1st Mee ---- 5th May, 2016
Ụlọ Ntuzi 15.4 E23, 15.4 H01 Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ogige
Anyị ga-achọ ịkọwa na maka 2016 Spring Holidays Holidays, anyị ga-ewepụ ụnyaahụ 7th na Feb. 13th wee laghachi ọrụ na Feb. 14th (Sunday), 2016. Iji mee ihe ngwa ngwa, anyị ga-arụ ọrụ na Feb. 6th (Saturday) 2016. Ndoo maka nsogbu ọ bụla mere ma kelee ekele maka nkwado na nghọta gị. Anyị na-atụ anya ka gị na gị kwenyere na New Year. Obi Ụtọ Afọ Ọhụrụ ma chọọ ka ịga nke ọma na afọ na-abịanụ. Oge ezumike: Fee 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th Anyị ga-akpọtụrụ gị ma ọ bụrụ na anyị alọghachi ọrụ!
Ezi afọ ọhụrụ! Maka afọ ọhụrụ na-abịanụ, anyị ga-enwe ezumike otu ụbọchị na 1st Jan. 2016 (Friday). Olileanya na ijere gị ozi ọma n'afọ ọhụrụ ahụ.
Ịnakọta aha maka ụlọ ọrụ enyemaka nke ụlọ ọrụ MH
Nye anyị ndụmọdụ gị, ị ga-enwe ohere inweta IPhone 6 na 10000RMB
Ikwenye na ọhụụ ụlọ ọrụ - ịmepụta ala nke ngwa ngwa uwe
Ụkpụrụ omume ma ọ bụ ihe dị mkpa kwesịrị ịba uru na azụmahịa ma gosipụta àgwà nke ụlọ ọrụ ahụ, dịka:
okwu okwu nke ngwa ngwa akwa
okwu okwu nke akwa na ngwa
okwu okwu nke ịkwa na zip
Aha kwesiri ịbụ mba (a sụgharịrị n'asụsụ Bekee), dị mma, dị mfe ịmata ọdịiche ma cheta
Aha kwesiri iji kwekorita okwu Bekee; ihe odide Chinese kwesịrị ịbụ n'ime edemede 4 na catchy
Aha kwesiri ijikota ya na okwu Chinese na Bekee
Kpọtụrụ: zipu ozi gị, aha na nọmba ekwentị gị
Otu onye mmeri mbụ (ihe nrite kwesịrị ekwesị 10000RMB): aha emesịrị ka e jiri ya ma mee ya
Abụọ ndị na-agbata n'ọsọ abụọ: otu IPhone 6 maka onye ọbụla
Òtù nyocha ahụ (nke ndị isi na ndị nnọchianya ọrụ nke Ngalaba Na-ahụ Maka Nzụkọrịta Ego na Ngalaba Na-ahụ Maka Ngalaba Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ) ga-atụle ma họrọ ndị mmeri mbụ na nke abụọ mgbe 5 na-arụ ọrụ ụbọchị nchịkọta. Ọ bụrụ na enweghị aha a kwadoro, nyezie ndị mmeri abụọ nke abụọ ma nweta ihe ntanetị
Aha niile kwesịrị ịbụ nke mbụ. MH nwere ikike nwebisiinka ma jiri aka nri ma na-edebe ikike nke nkọwa ikpeazụ.
Rịba ama: ememe egwu ahụ
N'ihi ọbịbịa nke Ememe Qingming, a ga-emechi anyị na April 6th (Monday) 2015. Ịgba aghara bụ ụbọchị kachasị mkpa nke àjà, anyị na-achụrụ ndị nna anyị àjà ma nwụọ ma wepụ ili ha iji gosipụta nkwanye ùgwù anyị na iburu ha n'isi. Anyị nwere mwute maka nsogbu ọ bụla kpatara. Anyị ga-alaghachi ọrụ na 7th, April (Tuesday) 2015. Daalụ maka nghọta gị na anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo ozugbo anyị laghachiri.
Nlekere 117TH Canton
The 117th A ga-enwe Fair Fair na Guangzhou, China. A ga-atụle ngosi ahụ n'ụzọ atọ, akọwapụtara dịka n'okpuru:
Oge M: 15th Apr ---- 19th Apr, 2015
Oge II: 23rd Apr ---- 27th Apr, 2015
Oge nke III: 1st Mee ---- 5th May, 2015
Ụlọ Ntuzi 16.3 D01-02 Ụlọ Egwuregwu Ngwá Ọrụ Na-enye Ihe
Ụlọ Ntuzi 15.4 G30-31, H14-15Textile Material Fair Complex
Ememe Ncheta Ememme Ememe Mmiri
Ọ ga-amasị anyị ịkọwa nke ahụ maka 2015 Ememe Ememe Ememe Ememe, anyị ga-ezumike Feb. 18th to Feb. 25th ma ga-alaghachi ọrụ Feb. 26th (Thursday), 2015. Iji mee ihe ngwa ngwa, anyị ga-arụ ọrụ na Feb. 15th (Sunday) na Feb. 28th (Saturday), 2015. Ndoo maka nsogbu ọ bụla mere ma kelee ekele maka nkwado na nghọta gị. Anyị na-atụ anya ka gị na gị kwenyere na New Year. Obi Ụtọ Afọ Ọhụrụ ma chọọ ka ịga nke ọma na afọ na-abịanụ.
Oge ezumike: 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th
Ụbọchị 2015 Ememe Afọ Ọhụrụ
N'ihi nbịaru nke 2015, a ga-emechi anyị na Jenụwarị 1st 2015 (Tọzdee) wee laghachi ọrụ na 2nd January 2015 (Friday). Ndoo maka nsogbu ọ bụla mere ma kelee ekele maka nghọta gị na nkwado gị. Na-achọ ka ị nwee ihe ịga nke ọma na ọganihu n'ime Afọ Ọhụrụ na-abịanụ. Anyị ga-eme ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị alọghachi. Daalụ nke ukwuu!
Ezigbo ndị ahịa,
N'oge na-adịbeghị anya, ụfọdụ ndị ahịa anatawo ozi-egha aghụghọ nke nwere adreesị email dịka nke anyị (dị ka, ma jụọ ndị ahịa ka ha kwụọ ụgwọ na akaụntụ ọjọọ, maka ịghọ aghụghọ ego).
Biko rịba ama: ozi ụlọ akụ anyị na-ejikọta ya na-enweghị mgbanwe ọ bụla (otu aha ahụ bara uru na nọmba akaụntụ), ọ bụrụ na ịnweta ozi-e na ihe ndekọ akụ akụ gbanwere ma ọ bụ ndozi site n'aka onye ọ bụla n'okpuru aha ụlọ ọrụ anyị, ma ọ bụ iwu na-akwadoghị, biko kpọtụrụ anyị ekwentị ma ọ bụ faksị ka ịlele ego ya abụọ.
N'ebe a, anyị depụtara adreesị ozi-e nke ụlọ ọrụ MH jiri, biko jiri nlezianya lelee anya mgbe ị nwetara ozi ịntanetị ma ọ bụ imelite email:
Tụkwasị na nke ahụ, anyị na-atụ aro ka ị na-edezi paswọọdụ email ma jiri nlezianya gbanwee oge ya, iji zere swindler na-ezu ohi ozi anyị ma zipụ ozi ịntanetị na MH.
Nlekere 116TH Canton
The 116th A ga-enwe Fair Fair na Guangzhou, China. A ga-atụle ngosi ahụ n'ụzọ atọ, akọwapụtara dịka n'okpuru:
Oge M: 15th Ọkt. ---- 19th Ọkt., 2014
Oge II: 23rd Ọkt. ---- 27th Ọkt., 2014
Oge nke III: 31st Ọkt. ---- 4th Onwa, 2014
Ụlọ Ntuzi 15.3 A01-03 Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ
Echiche m na MH - Site na ndị ọrụ mpaghara nke MH Lagos Branch, Nigeria
Aha m bụ Ndubuisi Glory Amaka, onye nnọchiteanya nke ndị ahịa na-elekọta nlekọta nke Mr. Robbin Wu na ngalaba nke na-arụ ọrụ maka ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe na MH Industry Company. M sonyeere MH ụlọ ọrụ na 2013.
Oge m n'ebe a na ụlọ ọrụ MH abụwo ihe magburu onwe ya na ntakịrị nrụgide na ọrụ nke m. Ụlọ ọrụ MH Lagos bụ ụlọ ọrụ nke onye ọ bụla na-achọ ka ya na ndị ọrụ ibe ya enyi China. Ha na-etinye ọchị na ihu mgbe ha na ndị ọrụ na ndị ahịa ha na-akparịta ụka, na-ekwu okwu ụfọdụ na asụsụ obodo anyị dika "kilo", "pewo", "dada ni". Anyị na-enwe mmasị iso ha na-akpakọrịta n'asụsụ Chinese dị ka "ni hao". Ndị ọrụ NJ Nigeria bụ ndị dị ebube. Anyị na-arụ ọrụ ma na-enyere ibe anyị aka iji nweta oke arụmọrụ na ihe dị mma.
Njikwa na nlekọta na-akwado, n'agbanyeghị nnukwu ọnụahịa nke ihe dị na mba ahụ. Ndị ọrụ na-etinye ike ha niile n'ịzụlite nzukọ. NH etinyewo agba n'ime ndụ ụmụ amaala Naijiria, nke kwekọrọ na motto anyị na-ekwu "maka ndụ gị mara mma".
MH Lagos nwere ngalaba dị iche iche, dị ka lace, wax, headtie, ihe ndị na-arụ ọrụ na ngalaba na-achịkwa ụwa. Anyị nwere nzukọ ndị ọrụ na mbido Tọzdee ọ bụla nke ọnwa. Ụlọ ahịa ndị kachasị mma na ndị ọrụ kachasị mma na ngalaba dị iche iche ga-akwụ ụgwọ ego, nke na-enye aka na-akpali ndị ọrụ niile ka ha dịkwuo irè ma rụọ ọrụ nke ọma n'ọrụ ha.
Ndị ọrụ nke ngalaba MH n'ụwa niile na-aga njem ndị ọzọ na Nigeria iji nyochaa ahịa ha. Anyi na-agbasi ike ikpuchi Naijiria nile na MH ihe omuma. Anyị enwetala ihe mgbaru ọsọ nke ịchịkwa ahịa ebe ọdịda anyanwụ nke Nigeria site n'itinye obi anyị na mkpụrụ obi anyị n'ọrụ. Ugbu a, m dị mpako ikwu na anyị emeela ka ozi anyị rụzuo.
-adịbeghị anya blog Posts
ememme ákwà embroidery eri ọnụ ọgụgụ obodo lace ákwà
Sheli mkpa Rịba
m hụrụ ngwaahịa gị n'anya
mh Na-akọwa 2013 Peru na Expotextil Peru
ị ga-eziga ozi email na Daalụ
Josephine Nabugoomu Na-akọwa 2013 Peru na Expotextil Peru
N'uhuruchi, nke ahụ bụ ihe ngosi ngosi. Aha m bụ Josephine si Uganda, Africa. Ọ ga-amasị m...
mh MH Decorative Tassel na Tape Magazine
Hi Flora, Daalụ maka mmasị gị na ngwaahịa anyị. Echere m na i nwere ike ịkpọtụrụ alaka anyị na Indi ...
Flora MH Decorative Tassel na Tape Magazine
Hi, m bụ onye ntanetị si India. Ị nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche ịkwado ngwaahịa. Ọ bụ ...
blog Home Categories --Na-atụgharị --Zippers --Ribbon & Tape --Ụzọ --Laces --Buttons --Interlining --Tassel & Fringe / Trimming --Tailoring Ngwa --Garments & Ngwa --Nweghari Machine & Akụkụ --Fabric --Onye ozo gbasara Anyị --MH Isi --MH Industrial --MH History --Trade Na-egosi - Ndị ọrụ anyị - Oghere Image - Album vidio Kpọtụrụ Anyị --Odi ebe --Feedback Community --Blog --App --Sonyere anyị